पलेँटीमा डा. थापा | Everest Times UK
पलेँटीमा डा. थापा
काठमाडौं । यो महिनाको सांगीतिक कार्यक्रम ‘पलेँटी शृङ्खला’मा डाक्टर सुमन थापाले गीत सुनाउने भएका छन् । सुमन पेशाले नेत्र-विशेषज्ञ हुन् तर उनी गिटारमा औंला चलाउँदै गाउन औधी रुचाउँछन् । आफैँ गीत लेख्छन् र धुन पनि भर्छन् । नब्बेको दशकमा ‘बाइपास’ समुहसँग संलग्न रहेर आफ्नो सांगीतिक रहरलाई अगाडी बढाएका सुमन, हाल ‘ब्ल्यू फ्रेट’ नामको सांगीतिक समूहमा क्रियाशील छन् । यसपाली भने उनी पलेँटीका वाद्यवादकहरूसँग गायन अभ्यासमा जुटेका छन् ।
प्राय अँग्रेजी भाषामा गीत, लेख्ने र गाउने सुमन थापा यसपाली पुरै नेपाली भाषाका गीत लिएर प्रस्तुत हुनेछन् । पलेँटीले उनलाई नयाँ सांगीतिक प्रयोग गर्ने सोचका साथ निम्त्याएको जानकारी गराएको छ ।
यसपालीको पलेँटीका निम्ति धेरैजसो गीत कवि श्रवण मुकारुङले लेखेका छन् । प्राय गीतमा डाक्टर सुमनको पेशा सुहाउँदो, आँखा र तिनले निहार्ने दृश्य सम्बन्धित विषय समेटिएको छ । सुमन थापाका निम्ति तयार पारिएका सबै नयाँ गीतहरूमा संगीतकार आभासले धुन भरेका छन् । यसपालीको पलेँटी पश्चिमी शैलीमा गाउने सुमन, ठेट नेपाली पारामा लेख्ने श्रवण र विभिन्न शैलीका सांगीतिक प्रयोग अपनाउने आभासको त्रिवेणी पलेँटी हुनेछ ।
तिलगंगा आँखा अस्पतालसँग आवद्ध थापा काठमाण्डौका बासिन्दा हुन् । उनले ‘एक एक पाइला’ अभियानमार्फत स्वास्थ्य शिविरहरुमा सहभागि भइ देशका विभिन्न जिल्ला भ्रमण गरेका छन् । उनले हालसम्म मोतिविन्दू र जलविन्दूका ५० हजारभन्दा धेरै सल्यक्रिया गरिसकेका छन् । शिविर-यात्राका क्रममा डाक्टर सुमनले अनेकौं अनुभव र अनुभूति संगालेका छन् । पलेँटीमा गीत सुनाउने क्रममा सुमनले आफ्ना तिनै अनुभव र अनुभूतिलाई समेत बाँड्ने छन् ।
नेपालयको आरशालामा पलेँटीका निम्ति गिटार समातेर नयाँ धुन अभ्यास गरिरहेका सुमन भन्छन्- ‘पलेँटीमा गाउने कुराले म एकदमै उत्साहित छु; श्रवणजीले लेख्नु भएका गीत र आभासजीले भर्नु भएका धुनले मलाई रमाइलो नसा लगाएका छन् । यो क्षण मेरो सांगीतिक मोडमा अचानक भेटिएको सुन्दर बगैँचा हो ।‘ प्रतिक्रिया दिएर उनी गीत गुनगुनाउन थाले- ‘किन बोल्नु बोल्दिन म; बोल्छ आँखाले, पत्तै नपाई यो मनपेट खोल्छ आँखाले’
‘यसपालीका सृजनाले भिन्दै अनुभूति गराइरहेका छन् । श्रवणजीको गीति लेखनको सरलताको सौन्दर्यलाई सुमनजीको स्वरमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ । ‘संगीतकार आभासले भने ।
यही कार्तिक महिनाको ८ र ९ गते हुने कार्यक्रमलाई पलेँटीको शुरुवातदेखि नै संचालन गर्दै आएका संगीतकर्मी आभासले गायक सुमन थापाको पेशा र सांगीतिक जीवनको सेरोफेरोमा रहेर सम्वाद पनि गर्नेछन् ।
लोकदोहोरीका सुपरस्टार गायक पशुपति शर्माको संघर्षको कथा
विश्वभरिका नेपाली प्रतिभालाई चिनाउन ‘एनआरएन द सिङ्गर’ आयोजना गरिने
जन्मदिनमा प्रेम गुरुङले ल्याए ‘शैलुर्बे ङोल्स्यो’गीत
बेलायतमा शनिबार र आइतबार ‘हेल्प नेपाल’ भर्चुअल सांगीतिक कार्यक्रम